ရွှေ ၁ ကျပ်သား ဆု နှင့် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် များစွာကို ကံထူးခွင့်ကိုရယူရင်း အကန့်အသတ်မရှိလေ့လာနိုင်သည့် တက်လမ်းအွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုက်ပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ အိုင်တီ၊ စီးပွားရေး၊ ပန်းချီ၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဗဟုသုတ နှင့် ဘာသာစကားများ ကို တစ်နေရာတည်းတွင်သင်ယူနိုင်ပါပြီ...
တစ်ရက်လျှင် ၁၀၅ ကျပ်
တက်လမ်းအွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုက ပေးမယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီစဉ်က ဘယ်လို အစီစဉ်မျိုးလဲ
ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေ ပါဝင်နိုင်သလဲ?
ဆုမဲကံထူးသူစာရင်းကိုဘယ်လိုသိရမှလဲ ၊ ဘယ်ကကြေညာပေးမှာလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ဘယ်မှာစုံစမ်းသိရှိနိုင်မှာလဲ?
အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာပါက မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း?
ဆုများအား ငွေသား သို့မဟုတ် တန်ဖိုးတူညီသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစားဖြင့် လဲလှယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား?
၁ မေး တက်လမ်းအွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကနေ ပေးမယ့် ပရိုမိုရှင်းက ဘယ်လို ပရိုမိုရှင်းအစီစဉ်မျိုးလဲ?
ဖြေ တက်လမ်းအွန်လိုင်းပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး ဘာသာရပ် သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူကြမယ့် သူတွေအတွက် တက်လမ်း “ခရစ္စမတ်” ပရိုမိုးရှင်း အစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂ မေး ပရိုမိုးရှင်းဘယ်နေ့ကစမှာလဲ?
ဖြေ (၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်) မှ (၂၀၂၀ မတ်လ ၁၅ ရက်) ထိဖြစ်ပါတယ်။
၃ မေး ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လိုရယူ နိုင်သလဲ?
ဖြေ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင်
(၁) လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://tl.lotayamm.com/ ကနေတစ်ဆင့် တက်လမ်းအွန်လိုင်းပညာရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) 8228 ကို TT ဆိုတဲ့စာသားကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့လည်း ဝန်ဆောင်မှုရယူကာ တက်လမ်းဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://tatlanapp.com) ထဲကို ဝင်ရောက်သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Google Play Store ကနေ တက်လမ်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
၄ မေး ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေပါဝင်လို့ ရနိုင်လဲ?
ဖြေ တက်လမ်းဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူ (အသစ်၊အဟောင်း) မည်သူမဆို တက်လမ်းပရိုမိုးရှင်းအစီစဉ်မှာ ပါဝင်လို့ရပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အနည်းဆုံး ၃၀ ကြိမ် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ငွေပေးချေထားပြီး သင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူနေသူဖြစ်ပြီး ဆုရွေးချယ်ချိန်မှာ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားဆဲ မည်သူမဆို ပရိုမိုးရှင်းအစီစဉ်မှာ အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅ မေး ပရိုမိုးရှင်း က ဘာဆုတွေပေးမှာလဲ?
ဖြေ ရွှေ (၁) ကျပ်သား ၁ ဆု နှင့် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၉) ကတ် တို့ကို မဲဖောက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆ မေး ကံထူးရှင်ကိုဘယ်နေ့ကြေညာမှာလဲ?
ဖြေ ကံထူးရှင်ကို မဲနှိုက် ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင် ကို (၃၁.၀၃.၂၀၂၀) တွင်ကြေငြာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၇ မေး ဆုကိုဘယ်နေ့ပေးမှာလဲ?
ဖြေ ရွှေ (၁) ကျပ်သား ဆု ကံထူးသူမှာ တက်လမ်းအွန်လိုင်းပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုမှ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသည့် ရက်ကို ကံထူးရှင် ကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်မူရင်းဖြင့် MPT ရုံးချုပ် (သို့) တက်လမ်းရုံး တွင် လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။
၈ မေး ဆုတွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ပေးမှာလဲ?
ဖြေ တက်လမ်း “ခရစ္စမတ်” ပရိုမိုးရှင်း ကာလ (၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ မှ ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၅) အတွင်း တက်လမ်းပညာရေးအသုံးပြုသူများထဲမှ အနည်းဆုံး ၃၀ ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအား ရွှေ (၁) ကျပ်သား ၁ ဆု နှင့် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၉) ကတ် တို့ကို ၂၆.၀၃.၂၀၂၀ တွင် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉ မေး ဆုမဲကံထူးရှင်စာရင်းကိုဘယ်လိုသိရမှာလဲ ၊ ဘယ်ကကြေညာပေးမှာလဲ?
ဖြေ ဆုမဲကံထူးရှင်စာရင်းများကို တက်လမ်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာကနေလည်း ထုတ်ပြန် ကြေညာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံထူးရှင်များကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ မေး ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ဘယ်မှာစုံစမ်းသိရှိနိုင်မှာလဲ?
ဖြေ ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေစိတ်အချက်အလက်ကို 09 898876787 နဲ့ 09 898876797 တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁၁ မေး အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာပါက မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း?
ဖြေ အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာပါက MPTနှင့် တက်လမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂ မေး ဆုများအား ငွေသား သို့မဟုတ် တန်ဖိုးတူညီသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစားဖြင့် လဲလှယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား?
ဖြေ ဆုများအား ငွေသား သို့မဟုတ် တန်ဖိုးတူညီသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြင့် လဲလှယ်မှု မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
What is promotion in Tat Lan Promotion?
How can we find out details about TatLan promotion?
How do we decide if something is controversial?
Could the customer change the prizes with cash or other same value items?
1 Q: What kind of promotion that TatLan give?
A: It is Christmas promotion for those who will take TatLan Online Education Service and learn lessons and subjects.
2 Q: When will the promotion start?
A: Promotion period is 16 December 2019 to 15 March 2020. We will celebrate the TatLan Christmas promotion3months continuously.
3 Q: How can we get the service?
(1) From Lo Ta Ya Web Portal http://tl.lotayamm.com/, we can enter TatLan Web Portal and get service.
(2) By sending “TT” to 8228 to take the TatLan Service and we can enter TatLan Web Portal (http://tatlanapp.com).
(3) Download the TatLan application from Google Play Store.
4 Q: Who can participate in the promotion?
A: Whoever who take the TatLan service (new/old) can participate in the promotion. A user who has given service fee at least 30 days inamonth within promotion period and must be active users when we select will be included in that promotion.
5 Q: What prizes does the promotion give?
A We will draw (1) Gold 1 Tical and (9) MPT 50,000 Kyat Top Up.
6 Q: Which day may you announce the prize?
A: The winners who won the Gold 1 Tical will be selected after promotion and announcement will happen on 31.03.2020.
7 Q: Which day may you give the prize?
A: The winners who won Gold 1 Tical have to be taken out the winning prize by himself/herself with his/her original NRC Card at MPT head office or TatLan office from the announcement date of getting the prize.
8 Q: How do you choose the prize?
A The users need to take the Tat Lan service.
During the TatLan Christmas promotion period (16th December 2019 to 15th March 2020), the users who apply to one day service by making payment at least 30 days will be rewarded One Gold 1 Tical and Nine MPT 50,000 Ks Top Up by selecting with Lucky Draw on 2020 March 26.
9 Q: How can we know winners and from where do you announce?
A: We announce the winner from Tat Lan Facebook page. And then we will contact to winner via phone.
10 Q: How can we find out details about TatLan promotion?
A: We can contact 09 898876787 and 09 898876797 to know details about TatLan promotion.
11 Q: How do we decide if something is controversial?
A: If there will be any controversial, MPT and TatLan decision will only be confirmed.
12 Q: Could the customer change the prizes with cash or other same value items?
A: Customer couldn’t change the prizes with cash or other same value items
MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - [ တက်လမ်းအထူးပရိုမိုရှင်း]
MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - [တက်လမ်း ခရစ္စမတ် ပရိုမိုရှင်း]
ဤစာမျက်နှာသည် “တက်လမ်း” ခရစ္စမတ် အစီအစဉ်(Promotion)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာ ရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ Promotion အား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွနု်ပ်တို့”၊ “ကျွနု်ပ်တို့ကို”၊ “ကျွနု်ပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ Promotion ကို Htut Co., Ltd. က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotion တွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် Promotion တွင် သင်၏ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်က လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Promotion ကို Htut Co., Ltd. က အပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး Promotion နှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များကိုမဆို Htut Co., Ltd သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ Promotion တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတိုင်း အတာသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Billing) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင်အား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။ သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲ သင်၏ Promotion သို့ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ကံစမ်းမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသော ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့်စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
၁.၄ Promotion တွင် သင်၏ ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောနှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိ သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည်။ Promotion ၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် သင့်အပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
၁.၅ သင်၏ Promotion အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ သင်၏ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မည် သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မဆို သို့မဟုတ် Promotion နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် MPT တွင် တာဝန် မရှိစေရ။
Htut Co., Ltd. သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှအခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ Promotion နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများ အားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ Promotion ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခု တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်း ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆို အကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ Promotion ကာလသည် ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၁၅ မတ် ၂၀၂၀ အထိ (Promotion ကာလ) ဖြစ်ပါ သည်။
၃.၂ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် တက်လမ်း ဝန်ဆောင်မှု ကို Promotion ကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
၄.၁ ဤ Promotion ကို အနည်ဆုံး အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်(၁၈)နှစ်နှင့် အထက်ရှိပြီး (MPT SIM အသုံးပြု နေသည့်) မှတ်ပုံတင်ထားသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
၄.၂ MPTနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊မပတ်သက်သည်ဖြစ်စေMPT အတွက်လုပ်ကိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ်MPT၏ ဝန်ထမ်းများ(မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများ အပါအဝင်) Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်မရှိပါ။
MPT အနေဖြင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းကောင်း၊ လူသိများစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ပါဝင် ကံစမ်းသူများ၏ဗီဒီယိုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော MPT ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဈေး ကွက်ရှာဖွေရန်၊ ကြော်ငြာရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အလို့ငှာ ပါဝင်ကံစမ်းသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကောက်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အကြား ဝေမျှခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် MPT၏တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းကို ပါဝင်ကံ စမ်းသူများက သဘောတူညီပြီး ခွင့်ပြုပါသည်။
သင်သည် MPT နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိ သောဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပါအဝင် သင်၏ Promotion အား အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) ဤတွင်ပါဝင်သော ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော စည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းတစ်ခုခု အား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ ကျော်ကြားမှုကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအား အလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အခွင့် အရေးများ (Publicity Rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေး များ အပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကို သင့်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) သင်၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) Promotion မှတစ်ဆင့် သင်တင်ပြသော သို့မ ဟုတ် သင်ရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်(စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်း ထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိရိယာမှတဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဦး၏ Promotion သို့ဝင်ရောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှု များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ် များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော) တစ်ခုခု နှင့် အားလုံးထံမှနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်း လွတ်စေရန်သဘောတူပါသည်။
၇.၁ Promotion တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်)နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤနေရာ၌ “ရှိသည့်အတိုင်း” နှင့် “ရှိနိုင် မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သောစနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည် Promotion လည်ပတ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် Promotion တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်သင်အသုံး ပြု နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ၎င်း၏တိကျမှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို မည် သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ Promotion အသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာတာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။
၇.၂ MPT သည် Promotion အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် Promotion တွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် အားဖြင့်ဖြစ်သော နစ်နာမှုများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော နစ်နာမှုတစ်စုံ တစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၃ သင်အနေဖြင့် Promotion သို့ ဝင်ရောက်ကံစမ်းရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Promotion နှင့်ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင် Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် ကံထူးဆုအား အသုံးပြုခံစားခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ် ဖြစ် ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက် ၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှု များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT အားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘောတူညီပါသည်။
၇.၄ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် MPT သည် ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသောအတိအလင်းဖော်ပြထားသည့် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များအားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
၇.၅ Promotion တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT မှ ပို့သောအီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်း မပြုပါ။
Promotion တွင် Htut Co., Ltd. အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ နှင့်ဆက်စပ်သောချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက်MPTတွင်တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏သတင်းအချက်အလက်၊ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခု ခုအား ရည် ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
တက်လမ်း ခရစ္စမတ် အစီအစဉ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
Promotion ကာလသည် ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ မှ ၁၅ မတ် ၂၀၂၀ အထိ (Promotion ကာလ) ဖြစ်ပါ သည်။ အသုံးပြုသူသည် တက်လမ်းဝန်ဆောင်မှုကို MPTဖုန်းနံပတ်များအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားရမည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသော MPTအသုံးပြုသူများ (MPT ဆင်းမ်ကဒ်အသုံးပြုသူ) မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် တက်လမ်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူထားသောသူများသည် ဤအထူးအစီအစဉ် တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အနည်းဆုံး သုံးဆယ် ကြိမ် အောင်အောင်မြင်မြင် ပေးဆောင်အသုံးပြုထားသူဖြစ်ရမည်။
Promotionကာလအတွင်း ဆုရရှိသူများကို Promotionကာလ ပြီးပါက ကံစမ်းရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Promotion ကာလ (၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ အထိ ) အတွက် ရွှေ (၁) ကျပ်သား ၁ ဆု နှင့် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၉) ကတ် တို့ဖြစ်သည်။
ဆုရွေးချယ်မည့်ရက် - ၂၀၂၀ မတ်လ ၂၆ ရက်
၄။ ကံထူးရှင်အား အကြောင်းကြားခြင်း
ဆုရရှိသူများကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆုရရှိသူများကို အောက်ပါနေ့ရက်တွင် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆုရရှိသူများ - ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက်
၅။ ကံထူးဆု(များ) အသုံးပြုခံစားခြင်း
၅.၂ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သောကံထူးရှင်များအားလုံးတွင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအား လုံးအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သာဟုကန့်သတ်မထားသည့် အမျိုးသားမှတ် ပုံတင်ဒ်ပြားရှိရမည်။
၆.၁ အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူ၏ အမည်သည် ပါဝင်ကံစမ်းသူတစ်ဦးအား ကြိုတင်၍ အကြောင်းမကြားဘဲ သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ ပုံမှန် မဟုတ်သော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သံသယရှိပါက ထိုပါဝင်ကံစမ်းသူ အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
MPT Terms and Conditions – TatLan Christmas Promotion
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the “TatLan Christmas Promotion” (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by Htut Co.,Ltd. By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
3.1 The Promotion period is from 16 December 2019 to 15 March 2020 (“Promotion Period”).
3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the TatLan service during the Promotion Period.
TatLan Christmas Promotion Terms and Conditions
Users can subscribe to the TatLan service using their MPT phone numbers.
MPT registered users (using an MPT SIM) who are Myanmar citizens and are TatLan subscribers can participate in the Promotion.
To be eligible, users have to successfully pay for the service at least7times for each month. The Promotion period is from 16th December 2019 to 15th March 2020. (“Promotion Period”).
Winners will be selected by lucky draw after finishing the Promotion Period. The prizes are as follows:
During the promotion period (2019 December 16 to 2020 March 15), the prizes will be One Gold 1 Tical and Nine MPT 50,000 Ks Top Up.
winner selection – 26th March 2020
Winners will get contact by phone.
Promotion winners – 31 March 2020
5. Use of the Prize(s)
5.1 All prizes are non-exchangeable, non-transferrable, non-assignable or not convertible to cash.
5.2 All confirmed winners must have national identification card, including but not limited to, all the necessary documentation.
6. Disqualification of winner
6.1 Name of Content Provider has the discretion to disqualifyaparticipant whom it suspects to be undertaking or in connection with any unusual or suspicious activities, without prior notice or without needing to give any reasons for doing so.